Vatobe ahiana hianjera : Nesorina ireo mponina eny Ambatovinaky -
AccueilRaharaham-pirenenaVatobe ahiana hianjera : Nesorina ireo mponina eny Ambatovinaky
Vatobe ahiana hianjera : Nesorina ireo mponina eny Ambatovinaky
Tadindomin-doza ireo mponina eny Ambatovinaky. Taorian’ny filatsahan’ny vatobe izay nahafatesana olona fito sy naharatrana olona 8 ny faramparan’ny herinandro lasa teo, teny Ampamarinana dia misy vato lehibe ahiana hianjera indray eny amin’ny fokontany Ambatovinaky. Nahazo fanaraina avy amin’ireo olona manodidina ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny alin’ny alakamisy 22 febroary teo fa hoe “misy bolongam-bato be ahiana hianjera ety amin’ny fokontany Ambatovinaky, boriborintany voalohany.” Vantany vao naheno izay dia tsy niandry ela ny avy tamin’ny kaominina Antananarivo renivohitra fa nandray ny andraikiny avy hatrany mba hisorohana ny loza mety hitranga. Nisy ny fidinana teny an-toerana nanao ny fitsirihana rehetra tamin’ny alalan’ny mpamonjy voina sy ny fitantanana ny loza voajanahary, fisorohana sy fiomanana(GRC). Taorian’ny fitsirihana dia nanapa-kevitra ny nanala ireo mponina mipetraka teny amin’ny manodidina ny tompon’andraikitra, ary nofefena avy eo ireo lalàna izay ahiana mety hitrangan’ny loza.
Araka ny fanazavana, dia tokony hovakiana ny vatobe raha ny fahitana azy, saingy miandry ny fanapahan-kevitra ny avy eny amin’ny Bngrc vao afaka manatanteraka izany. Mba tsy ho tampohin’ny tampoka sy loza toa ny nitranga teny Ampamarinana dia manentana hatrany ireo mponina mba tsy hisalasala hanatona ny fokontany akaiky azy raha toa ka mahatsikaritra tranga toa ny eny Ambatovinaky, araka ny fanambaran’ireo tompon’andraikitra.
Tsy mahazaka demokrasia, tsy mahazaka ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety… Izay no azo ilazana an’ingahy Andry Rajoelina ka nanehoany ny fomba ratsiny. Araka izany, notorian’ity filohan’ny Tetezamita eto aloha ity noho ny lahatsoratra an-gazety navoakany, ny ...Tohiny